59 Flash ဂေါ်ဒွန်စကားများနှင့်ပိုပြီး | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
အကယ်၍ သင်စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်များကိုနှစ်သက်လျှင် Flash Gordon သည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသင်သိရခြင်းထက်ပိုများသည်။ Flash Gordon သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လူသိများသောသူရဲကောင်းဖြစ်သည်။ ကာတွန်းဆရာအဲလက်စ်ရေမွန်တီထွင်ခဲ့သောသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ပြသည်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်တို့အတွက်အဆင်ပြေစေခဲ့သည်။ ၎င်းကို ၁၉၄၀ တွင် Flash Comics နံပါတ် ၁ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကမ္ဘာတစ်လွှားမှာပရိသတ်တွေဘာကြောင့်ဒီလောက်များရတာလဲဆိုတာကိုသင်သံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲနားလည်စေပါလိမ့်မယ်။ ဖြည့်စွက်ကာ ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမသွားသောရုပ်ရှင်လည်းပါ ၀ င်သည်။
ငါတို့ကိုဒီမှာထားခဲ့တော့မည်ဟူသော Flash Gordon စကားလုံးများကိုလက်မလွတ်လိုက်ပါနှင့်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်သူတို့ကိုကြိုက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ဤဇာတ်ကောင်သည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုမသိလျှင်၊ သင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်၊ သူ၏လေးရာသီကိုသင်စတင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ငါတို့ပြောနိုင်တာကမင်းကနောင်တမရဘူးဆိုတာပါပဲ။ သငျသညျစူပါမြန်နှုန်းမှာရာသီမြင်လိမ့်မည်!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Flash Gordon၊ နယူးယောက်ဂျက်လေယာဉ်များအတွက် quarterback
မင်းသား Barin! ငါမင်းရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူး၊ မင်းလည်းမင်းဖြစ်တယ်မင်းမင်းသိတယ် မင်သည် Mongo သတ္တဝါတိုင်း၏ရန်သူဖြစ်သည်။ အားလုံးအတူတကွစုရုံးကြပါစို့။
အဘယ်သူမျှမ Vultan ... ဒါဟာဆင်ခြင်တုံတရားငွေပေးငွေယူ, ဘီလီယံနှင့်လဲလှယ်ဘဝ။
ဒါ Dale မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပဲ။ ငါတို့ဒီမှာတကယ်မရှိဘူး။
အိုး Zarkov, ME ငါ့ကိုကြည့်နေတာလား –Flash Gordon
ငါတကယ် Dale, သင်စကားပြောပါလိမ့်မယ်။
Aura ကိုမကောင်းတဲ့နည်းနဲ့မယူနဲ့။ ဒါပေမယ့်ငါမမျှော်လင့်ဘူး!
ဟေး! ငါဘာပြောတာလဲ အကောင်းမြင်ပါ။
တစ်ခါတလေသင်ငါ့ကို Dale ကိုသတိပေးတယ်
ငါ Gordon ကနေ Flash ပါ။
ငါသူမကိုမချစ်ဘူး။ အကယ်၍ သူမသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်တွင်ခံစားချက်တစ်ခုခုရှိပါကအရူးအမူးစွဲလမ်းမှုသာဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါအရူးပဲ! ကျွန်ုပ်တွေ့ဖူးသမျှတွင်အကောင်းဆုံး၊ အသန်စွမ်းဆုံးနှင့်အပြောင်မြောက်ဆုံးသောလူသား Barin
ဇာတိပကတိ၌ဂေါ်ဒွန် Flash ။
ကောင်းပြီ၊ အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရှိတယ် ... နှစ်ဘီလီယံငါဆိုလိုတယ်။
ဟေ့၊ မင်းဒီမှာတကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ မင်းကိုသေနတ်နဲ့ပစ်သတ်တာကိုငါငြီးငွေ့နေပြီ။
ညံ့ဖျင်းသော Gremlin သူပူပြင်းတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်လို့သူထင်ခဲ့တယ်။
ငါသည်ဤ M-9 အမြောက်များ Doc rated ထင်! ဒီကစားစရာသေနတ်ကို Doc မှာစမ်းသပ်ပြီးပြီလား။
အကယ်၍ Mongo ကောင်းကင်ပြိုကျလျှင်ကြီးမားသောပိုက်ကွန်တစ်ခုလိုလိမ့်မည်။
သင်စိတ်ကူးနိုင်သည်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဦး တည်ရာ။
မဟုတ်ပါ၊ စောင့်ပါ၊ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ သင်စေ့စပ်ထားပါတယ်
Ming ကျော်ဂိမ်း! သင်၏အသက်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာငါသွန်းလောင်း။ ၊
Ninja, 'မျှော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်း' သည်ငါ့ဝေါဟာရ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင်၊ ကောင်းဘွိုင်း၊ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကိုငါကြိုက်တယ်။ အသက်ရှင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ပဲ။ ထိုကာလကအမျိုးသားများသည်မြင်းများဖြစ်ပြီးမြင်းများဖြစ်သည်။ သင့်မှာခြေထောက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ
မင်းရဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ Barin ကိုလုပ်ဖို့မင်းကဒီအပင်ငယ်လေးကိုသုံးမယ်ဆိုတာမင်းသိခဲ့ရင်…မင်းကိုရှောင်ဖို့ငါပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျူတာ Ming အတွက်အလွန်အကျွံ သူ့မှတ်ဉာဏ်ဘဏ်တောင်မှနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဟုတ်တယ်၊ ဒါက Palm Springs မဟုတ်ဘူး။
ဒီနေရာဟာ Los Angeles အဝေးပြေးလမ်းမထက်ပိုဆိုးသည်။
ဝိုး! ဟေး! ကိုယ့် Dale နောက်နေခဲ့သည်!
မင်းက Azura ရဲ့နှစ်ဆမှန်နေတယ်၊
ငါမကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်! ငါသူ့ကိုပြောဖို့စေလွှတ်လိုက်တာလို့ Dale ကိုပြောပြပါ။ မင်းသိတယ်။
၁၉၈၀ တွင် Flash Gordon မျှော်လင့်ချက်ကြီးမားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မှာဘတ်ဂျက်ကြီးကြီးမားမားရှိပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာကြယ်ကြီးတွေနဲ့အတူ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အချိန်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ယနေ့တွင်၎င်းကိုအစွန်းရောက်ရုပ်ရှင်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းတွင်၎င်း၏ပရိသတ်များရှိနေသေးသည်။
ဒီပြဇာတ်ကရယ်စရာကောင်းပြီးလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်တယ်၊ လူတော်တော်များများကပျော်စရာမကောင်းသလိုမကောင်းဘူး၊ ရုပ်ရှင်မအောင်မြင်ရင်တောင်မှလူအများအတွက်တော့အရမ်းကောင်းနေတုန်းပဲ။ Flash ဂေါ်ဒွန်တွင်ဘတ်ဂျက်ဒေါ်လာ ၃၅ သန်းရှိသော်လည်း ၂၇ မီလျံသာဒေါ်လာရခဲ့သည်။ သို့မှသာပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အများပြည်သူအတွက်တစ်ခုခုအလုပ်မလုပ်သောကြောင့်၊
မင်းတို့မင်းတို့ဒီစာပိုဒ်တိုတွေကိုသင်ကြိုက်တယ်၊ မင်းသူ့ပန်းချီကားတွေဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဝိုင်းမယ်ဆိုရင်အဲဒါဟာလက်ရှိအခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိရပါ၊ ဒါပေမယ့်သူ့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီ။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်တွေ့လိုလျှင်၎င်းသည်သူတို့၏ပုံရိပ်များ၏အထက်တွင်ပြုလုပ်ထားသည့်အချိန်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပြီး၊ အဟောင်းကိုသင်ကြိုက်လျှင်သင်စိတ်လှုပ်ရှားမည်မှာသေချာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » ၅၉ Flash ဂေါ်ဒွန်ကိုးကားချက်များနှင့်အခြားအရာများ